Moneta စျေး - အွန်လိုင်း MONETA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Moneta (MONETA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Moneta (MONETA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Moneta ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Moneta တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Moneta များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MonetaMONETA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000129MonetaMONETA သို့ ယူရိုEUR€0.000109MonetaMONETA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0001MonetaMONETA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000118MonetaMONETA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00117MonetaMONETA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000815MonetaMONETA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00288MonetaMONETA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000483MonetaMONETA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000173MonetaMONETA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00018MonetaMONETA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00289MonetaMONETA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000999MonetaMONETA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000701MonetaMONETA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00967MonetaMONETA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0218MonetaMONETA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000177MonetaMONETA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000195MonetaMONETA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00403MonetaMONETA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000898MonetaMONETA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0137MonetaMONETA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.153MonetaMONETA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0499MonetaMONETA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0095MonetaMONETA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00357
MonetaMONETA သို့ BitcoinBTC0.00000001 MonetaMONETA သို့ EthereumETH0.0000003 MonetaMONETA သို့ LitecoinLTC0.000002 MonetaMONETA သို့ DigitalCashDASH0.000001 MonetaMONETA သို့ MoneroXMR0.000001 MonetaMONETA သို့ NxtNXT0.00924 MonetaMONETA သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 MonetaMONETA သို့ DogecoinDOGE0.0379 MonetaMONETA သို့ ZCashZEC0.000001 MonetaMONETA သို့ BitsharesBTS0.00492 MonetaMONETA သို့ DigiByteDGB0.00448 MonetaMONETA သို့ RippleXRP0.000438 MonetaMONETA သို့ BitcoinDarkBTCD0.000004 MonetaMONETA သို့ PeerCoinPPC0.000423 MonetaMONETA သို့ CraigsCoinCRAIG0.0578 MonetaMONETA သို့ BitstakeXBS0.00541 MonetaMONETA သို့ PayCoinXPY0.00221 MonetaMONETA သို့ ProsperCoinPRC0.0159 MonetaMONETA သို့ YbCoinYBC0.00000007 MonetaMONETA သို့ DarkKushDANK0.0407 MonetaMONETA သို့ GiveCoinGIVE0.275 MonetaMONETA သို့ KoboCoinKOBO0.0288 MonetaMONETA သို့ DarkTokenDT0.000119 MonetaMONETA သို့ CETUS CoinCETI0.366
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 22:45:03 +0000.